सुनसान छ तनहुँ प्रहरी कार्यालय, लाखापाखा लागे युट्युबर ! – Nepal Online Khabar
फागुण २३, २०७८ सोमबार 190
काठमाडौं : दिनहुँजसो नाराबाजी, भीडभाड हुने स्थान तनहुँको प्रहरी कार्यालय अहिले सुनसान छ । न कुनै युट्युबहरुको ‘ग्याङ्ग’ छ न त आफूलाई ज’बर्जस्त सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरुको नै भीड छ । हो, अहिले सुनसान छ, तनहुँ प्रहरी कार्यालय ।
नाबालिग बालिकासँग ज’बर्जस्तीक’रणी गरेको अभियोगमा प’क्राउ परेका अभिनेता पल शाह यत्तिबेला यहीँ सुनसान रहेको प्रहरी कार्यालयको हि’रासतमा छन् । गत फागुन १५ गते प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्मण गर्न पुगेका अभिनेता शाहमाथि थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत तनहुँले आइतबार १२ दिनको समय थपेको छ ।
यसअघि प्रहरी कार्यालयको गेटअगाडि वि’रोध प्रदर्शन र अभिनेता शाहको पक्षमा खुबै हल्लाखल्ला गर्ने युट्युबर र अभियन्ता भन्नेहरु लाखापाखा लागेका छन् । प्रहरीलाई स्वच्छ र सत्य अनुसन्धान गर्न दिन भनिए पनि अटेर गर्दै ना’राबाजी गर्दै आएका उनीहरु एक्कासी कसरी त्यहाँबाट हटे त ?
फागुन २० गते गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीकाे साइबर ब्युरोले युट्युब, फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राममा झुट्टा शीर्षक राखेर सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउनेलाई हदैसम्मको का’रबाही गर्ने सूचना जारी गर्यो । त्यसअघिसम्म अभिनेता पल शाहकै पक्षमा उभिएर ना’राबाजी गर्दै आएका युट्युबर र सामाजिक अभियन्ताहरु सरकारको सूचनासँगै लाखापाखा लाग्न बाध्य भएका हुन् ।
राजधानीबाट केही युट्युबरसहित दमौली पुगेका भा’इरल म्यान पुण्य गौतम, जयकिशान बस्नेतलगायतको ग्याङ्ग अहिले त्यहाँ छैन । अर्काको चियोचर्चाे गरेर जथाभावी भिडियो खिचेर प्रसारण गर्ने युट्युबरमाथि सरकारले कडा नि’गरानी गरेपछि भाइरल म्यानहरु पनि बस्ने कुरै भएन । आफूलाई भा’इरल बनाउने युट्युबर नै नभएपछि भा’इरल म्यानहरु दमौलीबाट लाखापाखा लागेका छन् ।
युट्युबर र भा’इरल म्यानहरु दमौलीबाट लाखापाखा लागेसँगै पल शाहमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सहज भएको छ । नत्र यसअघि प्रहरीले अनुसन्धान वा सोधपुछका लागि मानिसहरु झिकाउदा लुकिछिपि ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अहिले त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन ।
Prevआफ्नै विद्यार्थीलाई ब’लात्कार गरेको आ’रोपमा एक शिक्षक प’क्राउ !
NextAvast Security Assessment For Mac
सकियो, भोलिदेखि सरकार पक्षको बहस सुरु